Imbali yoPhuhliso-Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
I-Sichuan Jinxing izixhobo zamandla acocekileyo Co., Ltd. yasekwa., ikhethekileyo kwi-R & D, imveliso kunye nenkonzo ye-compressor ezahlukeneyo, i-LNG, i-oyile kunye negesi yokuhlanjululwa kwe-skid izixhobo ezifakwe kwi-skid, iinqanawa zoxinzelelo kunye nemibhobho yoxinzelelo.
I-Sichuan Rongteng izixhobo ze-automation Co., Ltd., esekiweyo, lishishini lobugcisa obuphezulu obudibanisa ukuyila, ukuveliswa, ukuthengisa, ukufakwa kobunjineli kunye nenkonzo emva kokuthengiswa kwezixhobo ezizenzekelayo ezizenzekelayo kunye nejenereyitha yegesi.
Sangena kwishishini legesi yendalo.
Sichuan Hengzhong amandla acocekileyo apheleleyo izixhobo ezenza Co., Ltd., yasekwa.Yinkampani ephantsi ngokupheleleyo ye-Sichuan Jinxing izixhobo zamandla acocekileyo Co., Ltd. Inkampani ingumnikezeli wenkonzo okhethekileyo kuyilo, i-R & D, ukuvelisa, ukufakwa kunye nokusebenza kweeseti ezipheleleyo zezixhobo zokunyanga i-oyile ekrwada emphezulu, i-wellhead. unyango, ukucocwa kwegesi yendalo, ukubuyiswa kwe-hydrocarbon ekhanyayo kunye ne-liquefaction yegesi yendalo kwiindawo ezahlukeneyo zeoli kunye negesi.
Sifudukela kwisiseko esitsha sokuvelisa.
I-Sichuan Rongteng ithathele ingqalelo intengiso yehlabathi lonke yenkampani yeqela.
Siye saphanda saza saphuhlisa ijenereyitha yegesi.